Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations after adoption of the draft resolutions A/ES-11/L.4 at the 11th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly on the Situation of Ukraine, held on7April 2022
ယူကရိန်းနိုင်ငံအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ အထူးအရေးပေါ်အစည်းအဝေး၌ တင်သွင်းသည့် ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်း ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်းအား ဆိုင်းငံ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ပူးတွဲအဆိုရှင်အဖြစ်ပါဝင်၍ ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ခြင်း
၁။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ယူကရိန်းနိုင်ငံအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ အထူးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း အစည်းအဝေး၌​ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ အဆိုပြုတင်သွင်းသည့် ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်း ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ရုရှား ဖယ်ဒရေးရှင်းအား ဆိုင်းငံ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်း A/ES – 11/ L.4 အား မြန်မာနိုင်ငံမှ ပူးတွဲအဆိုရှင်အဖြစ် ပါဝင်၍ ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုမူကြမ်းကို ထောက်ခံမဲ (၉၃) မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ (၂၄) မဲ၊ ကြားနေမဲ (၅၈) မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
၂။ မဲပေးပြီးနောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားမှုတွင် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်မှ အောက်ပါအဓိက အချက်များကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်-
(က) ယနေ့ ကုလသမဂ္ဂအနေနှင့် အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ ကြောင်း၊ ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ နယ်မြေအချုပ်အခြာအာဏာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည် ချိုးဖောက်ခံနေ ရကြောင်း၊
(ခ) လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ ပြည်သူအဆောက်အအုံများ၊ ကလေးဆေးရုံများ အပါအဝင် မြို့များ တိုက်ခိုက်ခံရမှုတို့ကြောင့် ပြည်သူများ ဒုက္ခကြီးမားစွာ ခံစားနေရသည်ကို တွေ့မြင်ရ ကြောင်း၊ ကမ္ဘာနိုင်ငံများ၏ ရှေ့မှောက်၌ ဆိုးဝါးသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခကြီး တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားနေပြီး၊ စစ်ပွဲရပ်တန့်မှသာ ယင်းဒုက္ခခံစားမှုတို့သည် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ထပ်တလဲလဲ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သော ယူကရိန်းနိုင်ငံအား ကျူးကျော်မှု ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရေးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ထပ်လောင်းတောင်းဆိုကြောင်း၊
(ဂ) ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ဘူချာမြို့၌​ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းဗီဒီယိုနှင့် ဓါတ်ပုံများသည် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရပ်သားပြည်သူများ အသတ်ခံရသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားလုံး တာဝန်ခံမှုရှိစေ၍ တရားစီရင်မှုကို ခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေနှင့် ယူကရိန်းပြည်သူများနှင့်အတူ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း၊
(ဃ) အထူးသဖြင့် တရားမဝင် စစ်တပ်အာဏာရှင်အုပ်စု၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော မြန်မာပြည်သူများသည် ဘူချာမြို့ နှင့် အခြားဒေသများမှ ပုံရိပ်များအပေါ် ပို၍ ကိုယ်ချင်းစာနာမိကြောင်း၊ ဤပုံရိပ်များကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်၏ လူမဆန်သည့် များစွာသောလုပ်ရပ်များအနက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ကနီမြို့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ခရစ္စမတ် အကြိုနေ့၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မိဆိုကျေးရွာ၌ လူမဆန်သည့် သတ်ဖြတ်မှု၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ မတူပီမြို့နယ်၌ အဓမ္မဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်မှု၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပြည်သူ့အိုးအိမ်ပစ္စည်းများအား ဖျက်ဆီးခြင်း စသည်တို့ကို ထပ်လောင်း သတိရစေကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် အခြားကျွမ်းကျင်သူများက ယင်းပြစ်မှုများသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်စု အပေါ် ကျူးလွန်သောပြစ်မှုမြောက်နိုင်သည်ဟု ကောက်ချက်ချထားကြောင်း၊
(င) မြန်မာပြည်သူများအပေါ် စစ်တပ်၏ ရက်စက်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများသည် လျော့နည်းသွားခြင်း မရှိကြောင်း၊ လတ်တလောဖြစ်ပွားသည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံမြို့နယ်ရှိ မူကြိုကျောင်းသို့ အတင်းဝင်ရောက်၍၊ ကလေးများနှင့် ဆရာ/ဆရာမများကို ဒူးထောက်စေခဲ့ပြီးနောက် အသက် (၄)နှစ် အရွယ် ကလေး မောင်ဘုန်းသန့်ဝေယံအား ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ ကလေး၏ မိဘများဖြစ်သူသည် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနှင့် စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ပါဝင်သူများအဖြစ် စစ်တပ်မှ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသူများဖြစ်ရာ၊ အသက် (၄) နှစ် အရွယ်ကလေးအား ဓါးစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည် အခြားသော ကလေးငယ်များ ရှေ့မှောက်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့သော လူမဆန်ကြမ်းကြုတ်သည့် လုပ်ရပ်ကို မည်သူမျှ လက်မခံ သင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၏ အချိန်မီ ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို လိုအပ်နေကြောင်း၊
(စ) မိမိတို့၏ အတွေ့အကြုံအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် ၎င်းတို့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမည် မဟုတ် ကြောင်း သိရှိထားသည့်အတွက် ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များကို ရပ်တန့်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ တရားစီရင်မှုသည် အချိန်ယူနိုင်ကြောင်းကို လတ်တလော သမိုင်းသင်ခန်းစာမှ သက်သေပြလျက်ရှိကြောင်း၊ အချို့ကိစ္စရပ်များ တွင် တရားစီရင်မှု၌ ကြန့်ကြာမှုနှင့် ရပ်ဆိုင်းမှုများပင် ရှိနိုင်ကြောင်း၊ အကျိုးဆက်အနေနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ သည် အရပ်သားပြည်သူများအား ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ၏ မလွဲရှောင် သာသည့်ကိစ္စရပ်ဟု သတ်မှတ်လုနီးပါး ဖြစ်နေကြောင်း၊
(ဆ) ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် မည်သူမဆို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးအပါအဝင် တရားစီရင် ရေးယန္တရားများအောက်တွင် တာဝန်ခံမှုရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနှင့် ယင်းကြိုးပမ်းမှုကို ထောက်ခံမှုပြုရန် တိုက်တွန်းကြောင်း၊
(ဇ) ပြည်သူများအားလုံးအနေနှင့် အာဏာနှင့် လက်နက်အလွဲသုံးစားပြုသည့် အာဏာရှင်များကြောင့် ဆိုးဝါးသည့်အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အချိန်တွင် ခိုင်မာတင်းကျပ်သည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသာ အားကိုးအားထားပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
(ဈ) ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ အစချီမှုတွင် “အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ပြည်သူများဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့ သည် အင်အားပေါင်းစည်း၍ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် အခြေခံသဘောတရားများနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဘုံအကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင် လျက် လက်နက်အင်အားအသုံးမပြုရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချဆုံးဖြတ်သည်” ဟူသောအချက်ကို ထပ်မံပြောကြားလိုပါ ကြောင်း၊
၃။ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) အား ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်၊
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar after adoption of the draft resolutions A/ES-11/L.4 at the 11th Emergency Special Session of the
United Nations General Assembly on the Situation of Ukraine
(New York,7April 2022)
I thank you Mr. President for convening of this meeting. Myanmar cosponsored the draft resolution A/ES-11/L.4, just adopted at this august body.
In this regard, I wish to make the following points.
Today the United Nations is in credibility crisis. The very purpose of maintaining international peace and security as well as the basic principle of territorial integrity ofamember state is being violated. Overafew weeks, we have been seeing unbearable human sufferings in Ukraine resulting from the devastating attacks against the cities and towns across the country including civilian facilities and children hospitals. Thousands have been killed. Millions of people have been displaced. Civilian infrastructure has been damaged and destroyed. A grave humanitarian crisis is ongoing before the world’s eyes. All of this can be stopped only by the end of the war itself. Myanmar echoes the General Assembly’s repeated call for the immediate cessation of aggression and unprovoked attacks against Ukraine.
The most recent images and videos coming from Bucha and other places in Ukraine are shocking and horrific. It is clear that atrocities have been committed against the Ukrainian civilians. I express our deep sympathy for those who lost their loved ones in the serious crimes in Ukraine. These appalling killings of civilians must be independently investigated. All evidence must be preserved. Perpetrators must be held accountable and brought to justice. We stand firm and in solidarity with the people of Ukraine.
The images of Bucha are particularly relatable to the people of Myanmar, who have been experiencing atrocious massacre after massacre and atrocities committed by the illegal military junta against its own people. Here I wish to recall among others massacre in Kani township in July 2021, Christmas Eve massacre in Moso, Hpruso Township in December 2021, arbitrary arrest and extrajudicial killings in Matupi township in Jananury 2022, airstrikes and shelling against villages and civilians, arson attacks and destruction of private property. UN investigators and other experts have also concluded that these crimes can be amounted to war crimes and crimes against humanity.
The military junta’s brutal attacks against Myanmar people still continue unabated. Attacking on civilian including hospitals, children facilities and children is not acceptable to us. I am sure it is not acceptable to everyone. Allow me to share with you the horrific inhumane act against innocent children by the terrorist military in Myanmar recently. It is learnt that on5April 2022, the military troops forcibly entered intoapre-school in Ahlone Township in Yangon Region, Myanmar. They made all children and teacher to kneel down by aiming guns towards them and asked forafour-year-old boy called Bone Thant Wai Yan whose parent are in the wanted list of the military for engaging democracy movement and anti-military movement and supporting people defence forces. The boy was crying and shaking with fear when the soldiers took him for using him asahostage. This incident happened in front of very young children. This act of brutality should not be acceptable to everyone. An immediate and decisive action of the international community is needed inatimely manner.
We know from our experience that perpetrators do not stop when they know they will face no accountability. They are just emboldened and move to different victims. Recent history tells us that justice takes time. In some cases, justice is delayed or even stopped. Asaresult, the world is on the verge of normalizing targeted killings of civilians asamere inevitability of an armed conflict. The result would beadangerous age of impunity for everyone. That would not be confined only to the Ukrainian people. It could happen to anyone anywhere. We must not let that happen. People responsible for atrocity crimes regardless of who they are must be held accountable through available justice mechanisms including the International Criminal Court. We urge member states to support efforts to that end.
We, the people, can rely only on strict adhering to the rule of law, international laws, international conventions when we are facing horrific situation under which the authoritarians who abuse the power and weapons. Therefore, I wish to recall what the UN Charter begins with, “We the peoples of the United Nations determined to unite our strength to maintain international peace and security and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest.”
As such, we supported the resolution.